Qoorqoor oo u baaqay Maamuladda Puntland & Jubbaland | Keydmedia
Qoorqoor oo u baaqay Maamuladda Puntland & Jubbaland
Hadalkaan ayuu xalay ka sheegay furintaanka shirka Dhuusamareeb 3 oo qarka u saaran in uu fashilmo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye 'Qoorqoor' ayaa xalay shir jaraa'id uu qabtay ka jeediyay hadal quus u eg oo ku aadan in shirka Dhuusamareeb 3 uu qarka u saaran yahay inuu fashilmo, waqtiga oo dheeraaday awgiis, ayna ka maqan yihiin madaxda Puntland iyo Jubbaland.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa si gaar ah uga codsaday, uguna baaqay Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland inay shirka ka soo qeyb galaan, ayna qadariyaan gogosha ay dhigeen reer Galmudug, shirkuna uu socon doono.
"Gogosha waxaa dhigay reer Galmudug, waxayna idinka sugayaan inaad qadarisaan oo aad gogosha ay idiin fidiyeen walaalihiin ka soo qeyb gashaan, yaan maanta fursad qaali ah la lumin, ummadda Soomaaliyeed iyadaa dammaanad iskugu filan horay ayayna u heshiin jireen innaga oo kaligeen ah." Ayuu yiri madaxweyne Qoorqoor.
Inkastoo Qoorqoor hadalkiisa qeybo ka mid ahaa garnaqsi marka uu ka hadlayay in gogosha ay dhigeen reer Galmudug ay tahay in la qadariyo oo aan la lumin fursadda qaaliga ah, ayaa haddana waxaa dhinaca kale dadka siyaasadda odorsa sheegayaan in Qoorqoor hadaladiisa laga dareemayay inuu ka gaabsanayay maqnaanshaha shirka ee Ra'iisul Wasaaraha oo ah xil awood qeybsi beeshiisa leedahay.
Dalabkii Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ahaa in la helo Ra'iisul Wasaare ama Xukuumaddii fulin laheyd heshiiska siyaasadeed qeyb ka noqon laheyd, maadaama Ra'iisul Wasaarihii joogay Dhuusamareeb 2 lagu riday sifo aan sharci aheyn.
Qoorqoor ayaa sidoo kale sheegay in hadallo xanaf leh oo hawada la isu mariyo aan xal lagu gaareyn, balse wixii tabasho la isaga yimaado gogosha, islamarkaana halkaas lagu dhameeyo, shirka la amba qaado.
Qoorqoor ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu furmay wejiga koowaad ee shirka Dhuusamareeb 3, kaasoo sheegay in uu rajeynayo in uu guul ku soo dhamaado.